झुकेन उत्तर कोरिया,अमेरिकालाई धम्की दिँदै फेरि मिसाइल परीक्षण! | Chautarikhabar
प्रकाशित मिति: शनिवार, भाद्र १०, २०७४	समय - ७:३०:२१
भदौ १० –दक्षिण कोरियाका सेनाका अनुसार उत्तर कोरियाले फेरि मिसाइल परीक्षण गरेको छ। दक्षिणको सेनाले जनाएको छ कि उत्तर कोरियाले एक भन्दा बढी प्रोजेक्टाइल पूर्वी तटीय क्षेत्रमा प्रहार गरेको छ।र मिसाइल
गंग्वोन प्रान्तको तटीय क्षेत्रबाट उत्तर कोरियाले परिक्षण गरेको हो। उक्त परिक्षण गरिएको मिसाइल दुई सय ५० किलोमिटरसम्म पर पुगेको दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । उत्तर कोरियाले गएको महिना अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेपछि कोरिया प्रायद्विपमा झनै तनाव बढेको थियो ।यद्यपि उत्तरले आफ्नो परिक्षण कार्य रोकेको छैन।
अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षणपछिको परिस्थितिमा उत्तर कोरियाले प्रशान्त महासागरमा रहेको अमेरिकी भूमि गुआममा परमाणु आक्रमण गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।चेतावनिका बाबजुत अमेरीकाको पहलमा संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियालाई झनै कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। । तर उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक परीक्षण गरेको मिसाइल गुआमका लागि कुनै चुनौती नरहेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाले शनिबार बिहान तीनवटा मिसाइ प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ । उत्तर कोरियाले पहिलो मिसाइल शनिबार बिहान साढे दुई बजे प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयलले जनाएको छ । त्यसको ३० मिनेट भित्रमा थप दुईवटा मिसाइल प्रहार भएको बिबिसीले जनाएको छकालाई धम्की दिँदै फेरि मिसाइल परीक्षण!
उत्तर कोरियाले शनिबार बिहान तीनवटा मिसाइ प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ । उत्तर कोरियाले पहिलो मिसाइल शनिबार बिहान साढे दुई बजे प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयलले जनाएको छ । त्यसको ३० मिनेट भित्रमा थप दुईवटा मिसाइल प्रहार भएको बिबिसीले जनाएको छ
टेलिकमले धरहरा नबनाउने निर्णय गरेसँगै धरहरा पुनर्निर्माण अनिश्चित!
पहिलो खेलमै भुटानसँग हारेको नेपालले उचाल्यो उपाधी
शिक्षा ऐनको नवौ संसोधन विरूद्ध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित!